doorashooyinka | Warbaahinta Ayaamaha
XOG laga helay safarka Cali Guudlaawe ee Degmada Cadale
MUQDISHO-AYAAMAHA-Madaxweynaha Maamulka Hirshabelle Cali Guudlaawe Xuseen ayaa gaaray degmada Cadale ee Gobolka Shabeelaha Dhexe, halkaasoo ay ku soo dhoweeyeen mas’uuliyiinta degmada iyo Bulshada deegaanka. Guudlaawe...
Maxaa looga hadlay kulankii dhexmaray Sheekh Shariif iyo Cali Guudlaawe?
MUQDISHO-AYAAMAHA-Madaxweynaha Maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen oo ku sugan Magaalada Muqdisho ayaa maanta kulan la qaatay madaxweynihii hore ee dalka ahna Guddoomiyaha Midowga Musharixiinta...
Sareere Guud Bashiir Goobe oo Wasiir dowle lagu sasabay.
MUQDISHO-AYAAMAHA-Ra’iisul Wasaaraha XFS Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa wareegto uu soo saaray maanta oo ay taarrikhdu tahay 23//10/2021 ugu magacaabay Bashiir Maxamed Jaamac (Goobbe)...
DEG DEG:- Ahlusunna oo dib ula wareegtay goobihii saaka laga saaray iyo saldhiga Degmada oo…
MUQDISHO-AYAAMAHA-Ciidamadda Dowladda ayaa la wareegay Saldhigga Degmadda Guriceel iyo Xarunta degmadda, waxaana hadda la arkayaa Gaadiidkooda dagaalka oo wadada laamiga dhexmaraya. Dhanka kale waxaa wali...
Mukhtaar Rooboow oo markii ugu horreysay wareysi xasaasi ah banaanka keenay
MUQDISHO-AYAAMAHA-Sheekh Muqtaar Roobow Cali Abuu Mansuur oo markii ugu horeesay wareysi bixiyay tan iyo markii dhamaadka sanadkii 2018-kii laga soo xiray magaalada Baydhabo ayaa...
Hogaamiyihii Al-Qaacida ee Suuriya oo duqeyn lagu dilay.
MUQDISHO-AYAAMAHA-Militariga Mareykanka ayaa dilay hogaamiyihii sare ee Al-Qaacida Cabdul Xamiid Al-Matar kadib duqeyn diyaaradeed oo ka dhacday Siiriya, sida uu sheegay afhayeenka taliska dhexe...